Zingaki izinja ukulala ngosuku ngenani amahora?
Ikhaya Nomkhaya, Izilwane ezifuywayo
Inja - like a lot imizwa nemizwelo kufihlwe leli gama nje elilula. Mayelana izinja esingu eziningi movie engqondo, ezibhaliwe isosha esihlatshelelwayo nezingoma sung. Ngisho zonke saga eyaziwa uthi inja umngani yomuntu, okungukuthi ingxenye kuphela lembula iqiniso ngalezi ubudlelwano yangempela phakathi kwabantu kanye lezi zilwane abathembekile. Phela, inja - akusiwona umuntu oyedwa nje, kodwa ilungu agcwele umndeni ukunakekelwa ekhaya njengoba ingane yakho siqu. Experience, lapho isilwane egula, ngakho musa ukulala ebusuku, ehlezi phambi ozithandayo yakhe, futhi ujabulele yokutakula yayo.
Kwabaningi, inja Ungumngane kuphela ngeke sishabalalise futhi ngeke baphonse in isikhashana nzima. Lena isilwane weqiniso uthola amandla ezingeni enkosi yayo, njalo exudes sothando nokuzinikela okungantengantengi.
Abantu abaningi neze banake injongo eyisisekelo inja, ie umsebenzi ekhaya unogada. Umdlwane uvunyelwe ukuba ziziphathe kabi, ukuba igqoke emhlabeni efulethini, ukuhlafuna sneaker zikhothe amapuleti etafuleni. Ngenxa yothando lwakhe nangobuhle bakhe obungenamkhawulo izilwane abantu uzama ukudala izimo best for ukuphila kwezilwane othandekayo. Nakuba bengenayo imininingwane ephelele mayelana zonke izici zokuphila izinja, abanye abanikazi ukhathazeke kakhulu noma ngabe zondliwe ngokufanele etimeni letehlukene.
izinja elizolisayo ubuthongo
Ngokuvamile, abantu bakhathazekile umbuzo ukulala kangakanani kufanele inja usuku abe ubuthongo elizolisayo. Phela, abanikazi ngezinye izikhathi kubonakala sengathi izinja ukulala kancane kakhulu futhi kungase kuvele ingozi enkulu empilweni yabo. Ngisho ne ngokuqaphelisisa zabantu awuboni lezi zilwane ukuthi izilwane akwazi ukulala. Bathi nganoma isiphi isikhathi ubuthongo womsindo inja kungenzeki, ngoba ngaleso rustle kancane zisabela kuya sebekhathele ukukhonkotha kwazo noma ukutshikizisa umsila.
Ukuhlaziya umbuzo kanjani izinja eziningi ukulala ngosuku, udinga unake okukhethekile ukuziphatha isilwane. Uma isilwane esigulayo futhi uzizwa okuhle, kodwa ubuthongo namanje uhlala endaweni efanele, khona-ke cishe, akusiyo aneliseke hola yakhe. Zama ukushintsha indawo yokulala, niphumule inja.
Abantu asetshenziselwa konke liyokwahlulelwa isipiliyoni kanye nendlela yokuphila. Ngakho-ke, kukhona ngaso sonke isikhathi ukhathazekile nge umbuzo kanjani izinja eziningi ukulala ngosuku. Kodwa endabeni yezilwane ezifana izinja, le nombolo aluphumeleli. Ngemva elele izinja ke kuhluke ngokuphelele lonke kubantu. Lezi zilwane akudingeki isikhathi eside kangaka ngoba ubuthongo ngaphandle kokuphazamiseka. Nakuba balala okuningi kuka zabanikazi. Vele ukulala izinja ngakanye kubo ihora noma amabili ukulala ngokwanele uhambe kakhulu. To the best of umsebenzi wakhe umuntu akakwazi sonke isikhathi, ubusuku nemini ukuqapha izilwane, futhi ngenxa yalokho sikhohlwe isikhathi belele inja.
Ukulala omdala inja
Ukuhlaziya mangaki amahora ngosuku elele inja, udinga ukuba acabangele engu besikhumba saleso silwane. Njengoba omdala, inja abasha kudingeka nobuthongo 14 18 amahora ngosuku. Kodwa izinja amadala it is ayesuka amahora 17 kuya kwangu-20 ngosuku, njengoba impilo lezi zilwane kancane nangamandla. Ngakho-ke, lokhu inja akufanele ngaso sonke isikhathi kukuhlupha, imuphoqe ukudlala noma udle.
Ukuya emsebenzini nsuku zonke e imidlwane
Ukulala e nomdlwana yehluke kancane ebuthongweni omdala, ngoba izilwane ezincane kudingeka amandla amaningi, okuyinto liyanezela ukuthi ngokuxhaphaza ubuthongo. Ngakho-ke, ngizibuza kukangaki inja uyalala ngosuku, qiniseka ukuba banake engu-isilwane sakho. Puppy kubhekwa ubuthongo agcwele kusukela amahora ngosuku nesishiyagalombili amabili.
Ukulala isigaba e izinja
Ukuze sithole impendulo ngokugcwele umbuzo mayelana nendlela izinja eziningi ukulala ngosuku, kungaba ukucabangela ukwengeza izigaba ubuthongo isilwane. Zonke izinja babo bonke ubudala, kukhona ezimbili ezigabeni zokulala - kancane futhi okusheshayo. Kuyathakazelisa ukuthi, ngokuqapha isilwane ingakwazi ukuthola ukuthi isigaba ukulala kangakanani. Lapho inja ilele, twist ibe ibhola ngalesosikhathi he is esigabeni REM. Uma uqaphela inja yakho has a ukuphumula kwezinye izikhundla, lokhu kubonisa ngesikhathi REM.
abanikazi abaningi banesithakazelo umbuzo: bangaki izinja ukulala ngosuku, isibonelo Terrier? Bakholelwa ukuthi zonke izinja ukulala amanani angalingani isikhathi esingefani, kuye zohlobo besikhumba saleso silwane. Lo mbono ngokuyisisekelo okungalungile ngoba zohlobo ayinalo ithonya endleleni ukulala wesilwane. nomthelela obalulekile lonke efanele ungaba nesifo isilwane. Kulesi uyakwazi Yiqiniso, uzalala okuningi, ukwenqabela ukudla imidlalo. Kodwa abanikazi Ungahlala ukuhlukanisa enempilo kusukela inja ogulayo, ngakho ngesikhathi izinsolo kancane isifo inja kufanele obonwa wezilwane.
Ukubeka esigabeni senja ekhaya, umnikazi ngamunye kumelwe kuqala uzijwayeze ngolwazi ngempilo wesilwane. Lokhu kuzosiza kugwenywe ukungaqondi kahle eziningi ezihlobene okuqukethwe the pet kwesokudla. Akubalulekile sokuba netwetwe, ehlupha ngokwakho umbuzo kanjani izinja eziningi ukulala ngosuku. Into ebaluleke kakhulu ukuthi uma inja kuyajabulisa, ukudlala, udla ezinhle futhi siziphathe ngokwanele, kusho ukuthi kulungile nge embhedeni ogcwele.
Enye into, uma isilwane sakho sekuqalile ukuba baziphathe akunjalo, njengoba ngaso sonke isikhathi, ngokucijile yaba nolaka nangokwengeziwe futhi angilali nhlobo, khona-ke kungenzeka kube uphawu ezibaluleke ngempela. Kusukela Ukuyekwa kwezindlela zilale inja, kanye ukozela njalo, ngezinye izikhathi uphawu ofihlekile izifo ezingathi sína kwababhemayo. Kulokhu, ungakwazi Ungazindeli, futhi ukuthi kunesidingo esiphuthumayo ukukhombisa uchwepheshe isilwane. Kuphela luhlolo kanye laboratory igazi isilwane likadokotela uzokwazi ukucacisa isimo.
Ukufuya inja Akubalulekile disparage wokugoma yonyaka kwezilwane, ngisho noma inja ongacimekiyo ngaphandle. izifo ezibangelwa amagciwane kungathinta izilwane, kungakhathaliseki yazo. Ngakho-ke, ukuthatha omunye umthwalo ngosuku ukuphila inja, kufanele ucabangisise ukuthi uzokwazi ukudala izimo ezidingekile ukuthuthukiswa yayo egcwele. Kuphela nokudla okunomsoco, ulale ngokwanele futhi bathande abanikazi kuzodala zonke izimo ezidingekile ekukhuleni kahle umngane wakho ubuka.
Ukuchitha Izibuyekezo "Front Line" - panacea ngoba?
Uyini isifo ngezilayidi Red-eared ivamile
Indlela ukuhlanza ezindlebeni amakatshana: imiyalelo abanikazi abakhathalelayo
Ingabe amakati purr, uma abekho abantu?
Indlela ukukhetha umhlabathi iminenke. Achatina: ekhaya ngcono kanye nokugcinwa imithetho
Uyazi ukuthi kungani ingulube Guinea - ingulube?
Yekuchumana sendlela yokuphatha uhlevane ngemva imijovo
Ukunganakwa Sikhungo - lena ... ukunganakwa Pedagogical yezingane kanye intsha: izimbangela, Ihlahlubo ukulungiswa
Ongahluziwe jelly for namakati: ukwenza ukuphila kube lula ukuze abane-ezinemilenze!
"Akrihin": imiyalelo yokusetshenziswa, incazelo yokulungiselela, ukwakheka nokubuyekezwa
Linesizotha Igumbi umhlali: onesiqhova Chlorophytum
Yini ukwakheka ukukhetha, uma amehlo akho isondelene? Yenza Amathiphu
Cranberry. Izimo futhi izakhiwo ewusizo
Kuthiwani uma avuvukele lymph node entanyeni, futhi ubani ukuxhumana?
Ayikho indlela ukukhokhela loans, yini okufanele uyenze? Kabusha izikweletu loan
Nobuhle Izifundo: Indlela qondanisa izinwele ngaphandle straightener
Umkhawulo amandla materials - kuyini?